Hooyada dhashay Wariye Coldoon oo ka hadashay xariga wiilkeeda loogu gaystay Magaalada Hargeysa | Baydhabo Online
Hooyada dhashay Wariye Coldoon oo ka hadashay xariga wiilkeeda loogu gaystay Magaalada Hargeysa
Hooyada dhashay Wariye C/maalik Muuse Coldoon oo lagu magacaabo Faadumo Rooble Xuseen, ayaa waxaa ay ka hadashay xarigii wiilkeeda loogu gaystay Magaalada Hargeysa.
Ciidanka Booliska Somaliland, ayaa Arbacadii Wariyaha ku xiray Garoonka Cigaal ee Magaalada Hargeysa, ka dib markii uu ka soo laabtay safar uu ugu maqnaa Magaalada Muqdisho.
Hooyo Faadumo Rooble Xuseen, ayaa sheegtay inaysan garanayn sababta loo xiray wiilkeeda, iyadoo intaa ku dartay in wiilkeeda uu taggi jiray Magaalada Muqdisho, isagoona ahaa nin dadka u kaalmeeya, una wada dhaxeeya sida ay tiri Soomaalida.
Waxay meesha ka saartay in wiilkeeda uu ku shaqo leedahay arrimo siyaasadeed, balse waxaa ay qirtay in uu taageeray Madaxweynaha cusub ee Somaliya, Maxamed C/laahi Maxamed (Farmaajo).
Iyadoo la hadleysay Idaacadda Goobjoog, waxna laga weydiiyay in xariga wiilkeeda ay kala hadashay Xukuumadda Somaliland iyo Maamulka Garoonka Hargeysa, ayaa waxay xaqiijisay in aanay jirin cid ay kala hadashay amuurtaasi.
Masuuliyiinta Somaliland, ayaan weli wax war ihi ka soo saarin tallaabada lagu xiray C/maalik Muuse Coldoon, waxaase xarigiisa loo fishay mid salka ku haaya taageeradii uu u muujiyay Madaxweynaha Somaliya.
Wariye Coldoon oo sidoo kale ah samafale u adeegga dadka kuwooda nugul, ayaa maalmihii la soo dhaafay booqasho ku joogay Magaalada Muqdisho, iyadoona uu kula kulmay Madaxweyne Farmaajo.